Madaxweyne Xasan: Waan qancineynaa ciddii wax ka tabaneysa maamulka gobolada dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu diyaar u tahay iney qanciso qof kasta, qabiil kasta iyo maamul kasta ee wax ka tabanaya qaabka loo dhisamyo maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaasoo shalay heshiiskiisa lagu saxiixay Muqdisho.
“Qof kasta, qabiil kasta iyo maamul kasta ee wax ka tabanaya qaabka loo dhisayo maamulka gobollada dhexe waan soo dhaweyneynaa, waxaana diyaar u nahay inaan qancino” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in heshiiska ay Muqdisho ku gaareen dhinacyada uu khuseeyo maamulka gobollada dhexe uusan waxba u dhimi doonin maamullada jira sida Puntland oo qeybo kamid ah ay daris yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa boggaadiyay dhinacyadii heshiiska gaaray oo uu tilmaamay inay u gudbayaan samaynta maamul ay dadku u dhanyihiin.
Madaxweyne Xasan ayaa qaba in maamulka loo dhisayo gobollada dhexe uu xaqiijin doono himilooyinka shacabka gobolladaas.
“Waxaan maanta asaaska u dhigaynaa maamul ay yeeshaan gobollada dhexe oo xaqiijin doona himilooyinka shacabkeenna. Dhammaan xubnaha dowladdu oo ugu horreeyo Ra’iisul Wasaare Cabdiweli waxay kaalin weyn ka qaateen in aan halkaan soo gaarno” ayuu yiri madaxweyne Xasan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale amaan u jeediyey siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka gobollada dhexe oo uu tilmaamay iney sahleen sidii loo gaari lahaa heshiiska lagu dhisayo maamulka gobollada dhexe.
“Sidoo kale waxaa arrintan kaalin weyn ka qaatay siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka oo ugu horeeyaan Galmudug, Ximan iyo Xeeb iyo Ahlusunna” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa dadka gobollada dhexe iyo beesha caalamka ka codsaday iney qeyb ka qaataan sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha maamulka gobollada dhexe.
“Hawshan waa bilow weli ma dhammaan markaa waa in laga wada shaqeeyaa hirgelinta heshiishkan. Beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan xilligan aan ku jirno dadaalka aan dib ugu yagleelayno dhismaha dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya” ayuu sidoo kale yiri madaxwyene Xasan.
Maamulka gobollada dhexe oo ka koobnaanaya Galgaduud iyo qeyb ka mid ah Mudug ayaa noqonaya maamulkii 3-aad oo ay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamku aqoonsadaan tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana ka horeeyey maamulka Juba oo ka Kooban Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Askarta dowladda & Amisom oo howlgal ku qaaday Suuqa Bakaaraha